Imbali yelogo yeBurger King | Abadali be-Intanethi
Imbali yelogo yeBurger King
Alithandabuzeki elokuba IBurger King yinkampani ebiyinxalenye yoluntu lwethu ixesha elide, elide. Kodwa yintoni oyaziyo ngembali yelogo yeBurger King? Ngamanye amaxesha, ukujonga ngasemva kwiimpawu esele zimile kunokukunceda utyale iprojekthi, okanye ufunde ngokulula ukuba zeziphi izinto ezitshintshwayo kuyilo lwegraphic ukuphucula ilogo.
Kule meko siza kugxila kwimbali yeBurger King kwaye uya kuyazi ukuba yayiyintoni ilogo yabo yokuqala kunye nendlela abaye batshintsha ngayo kule minyaka idlulileyo ukuya kweli langoku, kwaye ngaloo ndlela baphucula ukubonakala kwabo okubonakalayo ebusweni bokutshintsha kwefashoni kunye nophuhliso loluntu. Ziphose kuyo?
1 Yadalwa nini iBurger King?
2 Imbali yelogo yeBurger King kukuvela "kobomi" bayo.
2.1 Ilogo yokuqala yeBurger King
2.2 Umzamo wesibini wokugqama
2.3 Ngowe-1957 yayingunyaka wotshintsho
2.4 Unyaka wenguquko
2.5 Ukuphuculwa kobuso ngo-1994
2.6 Uhlaziyo olutsha
2.7 Sibuyela emva kowe-1994
Yadalwa nini iBurger King?
Akunakuthiwa uBurger King wayenendlela egangathiweyo egcwele iirozi kuba ingekho. Umhla wokuqala obalulekileyo kwimbali yayo ngowe-1953.
Ngelo xesha sihlala eJacksonville, eFlorida, apho i-Insta Burger King imiselwe esixekweni.
Nangona kunjalo, emva konyaka, inkampani ayibonakali ihambe kakuhle kwaye baqala ukuba neengxaki zemali. Ke oosomashishini ababini, uDavid Edgerton kunye noJames McLamore, bathenga inkampani ukuba bayiqalise kwakhona. Kwaye ngenxa yoku, isigqibo sokuqala abasenzayo kukunciphisa igama labo kwiBurger King.
Kodwa elo gama alizange lenziwe "isiqalekiso sikaKumkani waseBurger" ayisayi kubachaphazela. Yaye kungekhona bona kuphela, kodwa bonke abo badlulayo, omnye emva komnye. Kunokuthiwa uBurger King uye waba "nootata" abaninzi de kwaba ngowokugqibela, iqela leRestaurant Brands International.
Imbali yelogo yeBurger King kukuvela "kobomi" bayo.
Ukukhumbula konke oku kungasentla, akukho mathandabuzo ukuba imbali ye-logo ye-Burger King ayiyi kuba mfutshane. Itshintshile i-logo yayo ngamaxesha amaninzi, nangona ukusuka kwi-1969 igcine isiseko kwaye iye yafumana kuphela i-touch-ups kunye "ne-facelifts". Kodwa kube njani? Makhe sibone ukuvela kwayo.
Ilogo yokuqala yeBurger King
Ukwazi i-logo yokuqala yolu phawu kufuneka siye kwimini eyadalwa ngayo, oko kukuthi, ngo-1953. Njengoko uya kukhumbula, igama lakhe yayingu-Insta Burger King, kodwa kwilogo yayo igama elithi “Insta” alizange livele.
Yiyo isotype, oko kukuthi, umbhalo Burger King kunye, ngaphezu kwayo, ilanga ngokungathi liyavela. Ngokungathandabuzekiyo, yonke into yayingwevu.
Kumdali, kwakuyindlela yokubonisa ukuba ukutya okukhawulezayo kwakukhula kwaye kwakuyisiqalo sokuba, nangona kwakusaqala, kuya kubaluleka.
Kodwa yahlala apho.
Umzamo wesibini wokugqama
Kunyaka olandelayo, xa uEdgerton noMclamore bathabatha iintambo, bagqiba kwelokuba hlukana nelanga, kunye negama elithi Insta. Ngenxa yoku, benza i-logo ngokwenyani yegama. Ndiyathetha, basebenzisa iBurger-King. Yiyo leyo.
Ifonti yagcinwa inesibindi kunye nemiphetho ekrazukileyo, kodwa ngaphandle kokuhonjiswa.
Ngowe-1957 yayingunyaka wotshintsho
Umbala ufikile. Kwaye kwakhona ireferensi yoguqulelo kunye nentsingiselo yokoqobo yegama. Injani ilogo?
Kulungile, masihambe ngamacandelo. Okokuqala kufuneka senze ukumkani ehleli kunye neglasi enkulu yesiselo (indiza ibandakanyiwe). Uhleli kwi-hamburger kwaye uthembele kumqondiso othi Burger King kunye nesiseko esifundeka kwiKhaya le-Whopper.
Kwaye konke oku ngombala.
Yilogo entsonkothileyo, enezinto ezininzi ekufuneka uzijonge, kwaye iyamangalisa xa ithelekiswa nazo zonke ezidlulileyo esizibonileyo ukuza kuthi ga ngoku. Kodwa yenza umahluko kunye nento abayithengisayo: iihambhega kunye neziselo.
Yayingeyonto imbi, kucingelwa ukuba bayigcina iminyaka eyi-12.
Kwaye kukuba kwiminyaka eyi-12 kamva, ngo-1969, kwafika utshintsho, kwaye mhlawumbi eyona nto ifana kakhulu nale yangoku njengoko bekwazile ukuyigcina ngee-tweaks ezimbalwa.
Injani i? Ngoko khawube nomfanekiso we-hamburger bun. Ewe, ngokukodwa iintlanti ezimbini ezityheli okanye ezinemibala ye-hamburger enemibala. Kwaye, embindini, igama elithi Burger (kunye nomgca olandelayo) uKumkani. Ewe, yiloo logo abayenzileyo ngaloo mhla.
Kule meko, i uchwethezo lwanika ukubaluleka ngakumbi kwigama elithi Kumkani kunoBurger (eyayinobukhulu obuncinane noko. Kwakhona, yayibubume obungqukuva nobuchubby, ngombala obomvu.
Yayiluphawu oluhle kakhulu ngelo xesha kwaye yayidume kakhulu ngenxa yendlela eyayinxibelelana ngayo necandelo layo kwilogo. Kwaye inyaniso kukuba ukususela kulo mhla kuncinci kutshintshile (ngaphandle kwesihlandlo esinye ukuba "izimvu ezimnyama" zaphuma).
Ukuphuculwa kobuso ngo-1994
Ukugcina uphawu esele lunalo ngo-1969, kule meko ngo-1994 bagqiba tshintsha i-typography yombhalo weBurger King kwaye uyenze ilungelelene ngakumbi, ngoonobumba abaqinileyo kunye nombala oqaqambileyo, obomvu oqinileyo kwi-orange. Oku kwayenza yabalasela ngakumbi.
Kwi-1999 uphawu lwenze utshintsho olutsha kwilogo. Kule meko wayiyalela kwi-arhente ye-Sterling Brands kwaye, nangona bagcina isiseko, oko kukuthi, i-hamburger bun kunye negama eliphakathi, linike umphumo onamandla ngakumbi. Phakathi kwezinye izinto, benza isonka sabonakala sinomthamo. Ukongezelela, bandisa kakhulu oonobumba, kangangokuba bade baphuma esonkeni. Kwaye ekugqibeleni bongeza icwecwe elizuba, elijiyile ngaphantsi kunangasentla.
Ngapha koko, le logo inokuba yile oyikhumbulayo kodwa ayisiyiyo yangoku, kuba ngo-2021 baye bayitshintsha kwakhona.
Sibuyela emva kowe-1994
Usakhumbula ilogo esakuxelela ngayo ngo-1994? Ewe, ngaphandle kwee-tweaks ezimbalwa, yilogo abathi ngo-2021 baphinde bayisebenzisa kwakhona.
Kwaye oko babekufuna nika "i-retro" kunye ne-nostalgic touch kwinkampani. Ngokwenyani, kuthiwa kukuqhubekeka kwaleyo isuka ku-1969 kodwa siyibona inxulumene ngakumbi naleyo isuka ku-1969. Umahluko kuphela ngale nto kukuba yonke iseti ifakwe kumda ongwevu omhlophe.
Ngoku uyayazi imbali yelogo yeBurger King, ukhetha eyiphi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Imbali yelogo yeBurger King
Indlela yokwenza i-gradient yemibala